Igumbi leChateau Horšovský Týn square / igumbi leChateau - I-Airbnb
Igumbi leChateau Horšovský Týn square / igumbi leChateau
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguHonza
Igumbi elihle lesitayela senqaba kwiziko lembali laseHoršovský Týn. Ifenitshala yamandulo, ibhafu, ukuhombisa inqaba, onke amanyathelo nje ambalwa ukusuka kwinqaba kunye chateau e Horšovské Týn.
Indlu entle ekwiziko lembali laseHoršovský Týn. Ifenitshala yamandulo, ibhafu, umhombiso wenqaba nje amanyathelo ambalwa ukusuka kwinqaba eHoršovský Týn.
Ifulethi elihle kwisitayile sembali kwisikwere sedolophu eHoršovský Týn (Bischofteinitz). Ifenitshala yamandulo, igumbi lokuhlambela kunye nokuhombisa inqaba nje isibini amanyathelo enqaba
Indawo enhle kwisitayela senqaba, ibhafu emilenzeni, iphepha lodonga kwiindonga
Igumbi elihle kwisitayela senqaba, ibhafu, iindonga ezihonjisiweyo
Ukuhamba kwi-castle park, ivenkile ye-pastry kwisakhiwo esilandelayo ngokuthe ngqo kwisikwere, umbono ovela kwinqaba yeCawa yaseSt. UPeter noPawulos, inqaba ekwiŠibeniční vrch, idolophu yaseDomažlice, umgama oyimizuzu engama-20 ngemoto ukuya kwiNtaba yaseČerchov, iyure ukuya eŠumava neyure ukuya eMariánské Lázně.
Ungaya kuhambo lokuya e-castle park, ndwendwela i-confectioner's ecaleni kweflethi yethu, inqaba yokubona yecawa yaseSt. UPetros noPawulos, inqaba yokubukela eŠibeniční vrch, kwidolophu yaseDomažlice, imizuzu engama-20 ukusuka kwinduli iČerchov, iyure enye ukusuka kwiintaba zaseŠumava neyure enye ukuya eMariánské Lázně.
Kuyenzeka ukuba uhlale kwipaki yenqaba okanye kwikhondom, inqaba yokujonga yecawa yaseSt. UPetr noPavel, inqaba yokubukela eŠibeniční vrch, Domažlice (Taus), imizuzu engama-20 ukusuka eČerchov, iyure ukusuka eŠumava kunye neyure ukusuka eMariensbad.
Umbuki zindwendwe ngu- Honza
Ndiya kukuvuyela ukukunceda ngayo nayiphi na imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho.
Nantoni na oyifunayo ndilapha ngenxa yakho.
Into oyifunayo, ndilapha ngenxa yakho.